Ny fijerena zanabolana ny sarintanin'i Imola izay nosintonin'i Leonardo da Vinci tamin'ny taona 1502 | Famoronana an-tserasera
Androany isika efa zatra an'ireo zanabolana ireo momba ny sari-tanys, azontsika atao ny tsy miraharaha fa efa tamin'ny taona 1502 dia noforonina ny sari-tany zanabolana voalohany amin'ny tanàna italiana. Ary ny adala izay namorona azy dia tsy mihoatra ny ambany noho ilay Leonardo da Vinci lehibe.
Genius tamin'ny androny izay efa talohany diateknolojia mamela antsika haka sary izao fotoana izao amin'ny zanabolana. Ny tena tsara indrindra, ny saina mamirapiratra an'ny mpanakanto italiana dia afaka namorona samirery ny fomba fahitana ny tanànan'i Imola avy eny amin'ny habakabaka.
Ary na dia mihetsika aza isika ny sari-tanin'ny tenan'i Da Vinci nalaina tamin'ny zanabolana avy ao amin'io tanàna io ihany, azontsika atao ny mahatakatra ny genius sy ny zavakanto ao ambadiky ny sain'ilay mpanakanto italianina manan-talenta italiana. Tamin'ny taona 1502 izy rehefa nahazo ny baikon'ny iray amin'ireo Borgias rehefa napetraka tao an-tanàna izy.
Iray amin'ny adidinao dia ny hanampy an'i Borgia hahafantatra ny faritanin'ny tanàna. Ary ny zavatra nahagaga dia nanalavitra ny sari-tany noforonina i Leonardo tamin'ireny fotoana ireny rehefa noforonina tamin'ny fomba fijery ny "normaly" ary ny iray manakana ny fahitana ireo trano manodidina.
Sarintany mahavariana raha jerena, saingy tsy nisy ny endrika sy ny refin'ireo manana zanabolana ananantsika ankehitriny ary i Leonardo no namolavola azy tamim-pahakingana. I Vitruvius, injeniera romana, ilay nanome aingam-panahy an'i Leonardo hamorona sarintany sarisary. Ny sarintany no manampy antsika hahafantatra ny halavirana, ny endrika, ny fiolahana ary ireo toerana mahaliana hafa hamaritana faritra iray.
Nampiasa kompà i Leonardo hitarika ny tanàna ary ny rindrina rehetra, indrindra ny zoro mitovy amin'izany ary afaka mamerina mamorona ny sarintany satelitaikan'ny tanànan'i Imola. Avelanay vaovao ianao Ny sarin'i Leonardo izay nipoitra tato ho ato.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Leonardo Da Vinci tamin'ny taona 1502 dia efa nanao sarintany "satelita" amin'ny tanàna italianina
Azonao atao izao ny manafatra mivantana avy amin'ny fakantsarinao na karatra fahatsiarovanao mankany amin'ny Lightroom amin'ny iPad
Azonao atao izao ny misintona ny topi-maso ny Adobe Photoshop Camera amin'ny Android: fampiharana mahafinaritra